Kugara neInvestment yeLatvia uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muLatvia kune:
● Kugara nekudyara muLatvia
● Ugari nekudyara kubva kuLatvia
● Visa yegoridhe muLatvia
● Pasipoti yechipiri kubva kuLatvia
● Kugara nekudyara kweLatvia nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muLatvia uye Magweta e Kugara neInvestment muLatvia uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muLatvia zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara neveInvestment vamiririri veLatvia vanopa mabasa ekugara nekudyara muLatvia, Residency nemapurogiramu ekudyara muLatvia, Residency nehurongwa hwekudyara muLatvia, yechipiri Residency nekudyara muLatvia, mbiri Residency nekudyara muLatvia, ugari uye ugari nekudyara muLatvia. , Kugara zvachose nekudyara muLatvia, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muLatvia, Kugara nehurongwa hwekudyara muLatvia, Kugara nehurongwa hwekudyara muLatvia, Citizenship nekudyara muLatvia, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muLatvia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muLatvia, wechipiri Citizenship nekudyara muLatvia, hunyanzvi hwehukama nekudyara muLatvia, kugara uye ugari nekudyara muLatvia, ugari uye ugari nekudyara muLatvia, hupfumi Citizenship zvirongwa muLatvia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muLatvia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muLatvia, wechipiri pasipoti muLatvia, yechipiri mapasipoti muLatvia , chirongwa chechipiri chepasipoti muLatvia, mbiri yechipiri pasipoti muLatvia, pekugara uye yechipiri pasipoti muLatvia, yedhipatimendi repasipoti repashure muLatvia, yechipiri pasipoti nekudyara muLatvia, yechipiri ugari pasipoti muLatvia, yechipiri pasipoti chirongwa muLatvia, chechipiri pasipoti zvirongwa muLatvia , visa yegoridhe muLatvia, mavhiza endarama muLatvia, zvirongwa zvendarama zveVisa muLatvia, vhiza yegoridhe vhiza muLatvia, yechipiri visa yegoridhe muLatvia, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muLatvia, vhiza mbiri yegoridhe muLatvia, ugari uye vhiza yegoridhe muLatvia, kugara uye yendarama vhiza muLatvia, yendarama vhiza ugari muLatvia, goridhe vhiza chirongwa muLatvia, goridhe vhiza zvirongwa muLatvia.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muLatvia nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muLatvia ye Residency nekudyara: EUR 80,000
Nhanganyaya Latvia uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveLatvia
Maindasitiri muLatvia akatanga muchikamu chekupedzisira chezana regumi nemapfumbamwe century, uye nezana ramakore rechimakumi maviri, nyika yacho yaive yakasimukira zvakanyanya munyika dzeBaltic. Shanduko dzakatarwa dzemari dzakaitika zvichitevera rusununguko rweLatvia muna 1991, nyika payakaramba ichienda kuhupfumi hwemusika. Kutanga mukati mema1990, hupfumi hwakawedzera, uye nepakati pezana ramakumi maviri nemakumi maviri emakore, maindasitiri mazhinji muLatvia akange ashandiswa pachivande.
Dunhu reBaltic nderimwe revanonyanya kutsvaga kupokana nevanofungidzira vasina kujairika. Pakati penyika nhatu dzinopa hwaro hunoshamisa uye zviridzwa zvekubatanidza, Latvia inomira yoga nekupa rubatsiro runoshamisa nekumisikidza fungidziro dzisina kujairika.
Sangano-rinodzidziswa nemari nehurumende nderemahara kune vatapwa vanogara muLatvia, zvichipa kuti iwe ubhadhare mari yakakosha yemubatanidzwa yekuzorora uye uve nehurongwa hwekurarama, kunyangwe vakawanda vachiramba vanofunga kusarudza kuendesa vana vavo kuchikoro chepasirese, sezvo kurovedza muviri kuchidzidziswa Chirungu uye kugona kunoonekwa kwese kwese.
Latvia inogara kumakoreji maviri akakosha, Riga technical University uye University yeLatvia, uye hwaro hwakasiyana hwakawanda hunosanganisira Latvia University of Agriculture uye Daugavpils University.
Sangano rezvekurapa reruzhinji muLatvia rinotsigirwa nemubatsiri wemudyandigere uye zvikamu zvishoma zvemamwe marapirwo uye rinotarisirwa neLatvia National Health Services.
Masisitimu eruzhinji aripo ekudzinga kushanda nekugara muLatvia, zvisinei, pachave nemitero midiki kune mamwe manejimendi, uye hunhu hwekuchengeta hausi hwenhambo yakafanana nhamba yakafanana yeimwe nyika dzeEurope.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti yakavandudzika nguva pfupi yadarika, yeLatvia ruzhinji rwekurapa hurongwa hwakamira pakati pezvinonyanya kutyisa muEurope nekuda kwenguva refu yakarembera nguva dzakasimba dzekurapa, mahofisi asingabatsiri, uye kushomeka kwevashandi vekiriniki uye nemushonga. Huwandu hwemakiriniki ekukurumidzira muLatvia akapatsanuka kubvira 2008, uye huwandu hwakawanda hwevanyanzvi vekiriniki vepamusoro vakasiya kushanda munyika dzakasiyana.
Nekudaro, vatapwa vazhinji vanogara muLatvia vanoburitsa zvakavanzika zvekurapa, uye vanoshandisa hofisi yakazvimiririra muRiga, guta guru kana kutsvaga kurapwa kunze kweLatvia mune iri pedyo-nyika ine mahofisi epachivande ari nani.
Kana iwe uchida kutyaira kuLatvia 72,444 km yemugwagwa musangano, iwe uchave nesarudzo yekuzviita zviri pamutemo kwehafu yegore nemvumo yekutyaira kubva kurudzi rwako rwekutanga.
Nepo metropolitan yemigwagwa nemigwagwa inodakadza ichave yemhando inogamuchirwa, migwagwa mumatunhu ematunhu inogona kunge ichitsausa, saka vatapwa vanogara muLatvia vanokurudzirwa kutyaira vakangwarira.
Huwandu hwakawanda hwenzvimbo dzemaguta dzine masangano akawandisa ekufambisa, asi kutakura pachena hakuna kujairika munzvimbo dzematunhu.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeLatvia
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muLatvia
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Rativhiya
Kugara nekudyara kweLatvia
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweLatvia
Mushure memakore mashanu aine chimiro chePR.
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veLatvia
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweLatvia
Wokune imwe Nyika Investor Bond Pa 0% yemari yemutero € 1million yakaiswa mubondi
Enterprise kudyara Kwemakore matatu € 3 yakaiswa mari muIrish Enterprise
Mari Yekudyara € 500,000 yakadyarwa muhomwe yakatenderwa.
Zvivakwa Zvekutengesa Zvivakwa Mari shoma yekudyara mune chero yeIrish REIT yakanyorwa pane yeIrish Stock Exchange yeEUR mamirioni. Iyo mari inosvika kumamiriyoni maviri emadhora inogona kugoverwa kuburikidza nemhando dzakasiyana dzeIrish REIT.
Yakavhenganiswa Investment Investment in a residential property with a minimal valuation of EUR 450,000 and a direct invest in a immigrant investor bond amount to EUR 500,000, with a minimum investment of EUR 950,000. Huwandu hwekudyara mubhodhi hauchina hukama nekukosheswa kwenzvimbo yatengwa.
Endowment Chipo chemunhu chemubhadharo weEUR 500,000 (EUR 400,000 apo vanhu vashanu kana vanopfuura vanopa zvipo zvavo kune rimwe basa rakakodzera).
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweLatvia
Rativhiya is nyika diki yeBaltic iyo ine yakazara EU uye Schengen yenhengo yenhengo. Inopa chirongwa chiri nyore chekudyara chekugara iwe nemhuri yako. Iwe uchave uine vhiza-yemahara kuwana kune ese 26 nyika dzeSchengen zone. Kunze kwezvo, iwe unokwanisa kuwana dzidzo yenyika uye hutano muLatvia, uye kodzero yekugara nekushanda imomo. Iko hakuna mamiriro ehupenyu hwekugara, zvisinei, iwe unogona kupinda uye kubuda munyika kakawanda sezvaunoda.
Kufamba kwemhuri muLatvia
Kana mvumo yako yekugara yangopihwa, wako wawakaroorana naye uye vana vari pasi pezera rako vanogona zvakare kuwana mvumo yekugara zvichibva nenzira yekubatanidzazve mhuri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muLatvia insite
Iwe uchapihwa yemakore mashanu-mvumo yekugara kwenguva pfupi, iyo iwe yaunogona kuwedzera pasina imwezve mari. Iwe haufanire kupa hupenyu hwepamoyo muLatvia, izvo chete zvinodiwa ndezvekuti iwe une kero yakanyoreswa uye unoshandisa rinenge zuva rimwe pagore ipapo. Mushure mekuve nemakore gumi ekugara zviri pamutemo munyika, unogona kuwana ugari.
Mari inodiwa yeLatvia
Pane sarudzo nhatu dzekuva nenzvimbo yekudyara muLatvia. Chinhu chekutanga chaicho ndechekuti iwe unogona kutenga zvivakwa muLatvia kweinenge EUR 250,000. Sarudzo yechipiri ndeyekusabhadharwa-kusununguka kwehurumende chisungo, zvakare iine zvishoma zvinodikanwa zveEUR 250,000. Uye pakupedzisira, iwe unogona kuisa mari mubhangi bhondi kweinosvika mashoma eEUR 280,000, uye uwane mubereko pane yako mari. Zvese zvekudyara zvinofanirwa kuchengetwa kwenguva yemakore mashanu. Mari yepasi pehurumende yeEUR 5 ndeyekubhadharirwa mari yehurumende chisungo uye sarudzo dzemabhangi.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweLatvia
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents yeLatvia uye Residency ne Investment Lawyers yeLatvia inopa vatengi uye mhuri dzavo muLatvia nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuLatvia, kugara nekudyara kubva kuLatvia uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuLatvia kana Golden Visa kubva kuLatvia kana ugari nekudyara kubva kuLatvia kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuLatvia, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kumisikidza kambani mu Latvia kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muLatvia uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuLatvia nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari veLatvia:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeLatvia, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeLatvia, inokwanisika investment immigration solicitors kuLatvia, inokwanisika Residency nemaInvestment consultants yeLatvia, inokwanisika Residency nemaInvestment magweta eLatvia uye inodhura yekubva kune dzimwe nyika yekudyidzana femu yeLatvia
Kugara nekudyara kubva kuLatvia kuenda ku37 Nyika
Ndarama vhiza muLatvia kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuLatvia kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuLatvia kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Yakavakirwa kutama kubva kuLatvia kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nezvirongwa zvekudyara kubva kuLatvia.
Goridhe visa zvirongwa muLatvia kuenda ku37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuLatvia kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuLatvia kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuLatvia kuenda ku106 Nyika.
Kugara neInvestment yeLatvia kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muLatvia nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muLatvia, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweLatvia. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa muLatvia vane rekodhi rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muLatvia, vachitora zvakanakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveLatvia nemari yekudyara muzvivakwa muLatvia.
Unoda kuziva - Latvia Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta yeLatvia ichapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Residency nekudyara kuLatvia. Yedu akajairwa masevhisi ekugara neInvestment kuLatvia inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utame kubva kuLatvia kana kuenda kuLatvia, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweLatvia kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeLatvia uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kweLatvia, tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kweLatvia isu taizoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kweLatvia. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweLatvia uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kweLatvia kwagadzirira, tichazoizadza nezviremera zvakakodzera zveLatvia.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweLatvia changobvumidzwa, isu tinogovana nhau dzakanaka newe uye tinotanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muLatvia kune vakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muLatvia:
Residency nebasa rekudyara kweLatvia hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera zvombo uye mabara kubva kana kuenda kuLatvia.
Residency nezvirongwa zvekudyara kweLatvia hadzipi kupihwa kwehunyanzvi kuongororwa muLatvia kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuLatvia.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweLatvia hazvipi kupihwa kune chero zvisiri pamutemo kana zvematsotsi zviitiko muLatvia.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeLatvia haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muLatvia.
Residency nebasa rekudyara kweLatvia haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebakitiriya kana zvombo zvenyukireya muLatvia.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweLatvia haruwanikwe kune vanhu veLatvia vanoita mukutengesa, kuchengetedza muLatvia, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeLatvia haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeLatvia haisi yezvitendero uye masangano avo muLatvia.
Residency nebasa rekudyara mu Rativhiya haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muLatvia.
Kugara Kwedu makurukota muLatvia haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muLatvia.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veLatvia neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba kupi zvako kubva kuzviremera muLatvia kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muLatvia.
Kugara nekudyara muLatvia nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muLatvia yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa kuLatvia
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveLatvia, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kweLatvia inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheLatvia.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuLatvia vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuLatvia.
Zvakaitika Kugara nevekudyara kukumbira kweLatvia uye vamiriri vepamutemo veLatvia vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veLatvia kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kweLatvia uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuLatvia
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Latvia, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuLatvia kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuLatvia
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweLatvia ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veLatvia, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweLatvia uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeLatvia
Maitiro Ekubvumidza Kubasa kweLatvia
Kwekugara kwenguva pfupi muLatvia
Permanent Residence muLatvia
Citizenity of Latvia
Vamiriri veMamishinari neVamiriri veLatvia
Kugara neInvestment muLatvia uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muLatvia nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuenda kuLatvia nekudyara mari, isu semumwe wako weLatvia, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muLatvia nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweLatvia, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muLatvia, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano veLatvia vachitigadzira one-stop shop yeLatvia nenyika 106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reLatvia mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Residency nekudyara kweLatvia nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muLatvia nekukunze.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muLatvia kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muLatvia inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muLatvia
Chero ani investor anotamira kuLatvia angazoda akaundi yebhangi muLatvia uye account yebhangi yekambani muLatvia, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muLatvia
Incase iwe unoda kubvunza muLatvia, ye mhinduro dzemadhijitari muLatvia senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muLatvia kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Latvia kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muLatvia kutanga pakarepo muLatvia.
HR Services muLatvia
Our kambani yevashandi muLatvia inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muLatvia vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeLatvia
Bhizinesi foni nhare dzeLatvia pamwe ne nhamba dzeLatvia Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muLatvia
Accounting, zvakakodzera kushingairira muLatvia uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muLatvia
Setup bhizinesi muLatvia
Mushure meResidency nekudyara kuLatvia, setup bhizinesi mu Rativhiya.
Isu tinopa pazasi kutaurwa IT mhinduro muLatvia
Kugadzira Webhu muLatvia
Ecommerce Kuvandudza muLatvia
Webhu kuvandudza muLatvia
Blockchain kuvandudza muLatvia
App Kubudirira muLatvia
Software Kubudirira muLatvia
Magweta eResidency neInvestment muLatvia
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuLatvia uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuLatvia, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeLatvia ine vamiririri vekunze vanoendawo muLatvia, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeLatvia ne yakajeka nzira dzekudyara mhinduro dzeLatvia vanhu pamwe nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kweLatvia inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara yeLatvia, pane mvumo yekugara muLatvia inogamuchirwa.
Simba regweta reLatvia rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muLatvia Kana iwe uri muLatvia kana kuronga kushanyira Latvia, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweLatvia kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeLatvia. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakapihwa dzidziso kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weLatvia.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muLatvia
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muLatvia?
Kugara nekudyara kuLatvia, kunogona kutsanangurwa sekuwana, kugara kweLatvia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweLatvia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuLatvia, ugaro nehurongwa hwekudyara kweLatvia. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kweLatvia, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muLatvia, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muLatvia uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kweLatvia, vachishanda munzvimbo dzakanakisa dzekugara nevamiriri vezvekudyara muLatvia, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muLatvia.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kweLatvia | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muLatvia | Kugara nemagweta eInvestment muLatvia | Kugara nemagweta ekudyara muLatvia | Kugara nevekudyara varairidzi veLatvia
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muLatvia?
Ugari nekudyara kuLatvia, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweLatvia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweLatvia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muLatvia. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuLatvia, ugari hwemo nehurongwa hwekudyara kweLatvia inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kweLatvia, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muLatvia, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muLatvia uye nehugari hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kweLatvia, vachishanda kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muLatvia, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika muLatvia.
Affordable Investor immigration services yeLatvia | Affordable immigration solicitors muLatvia | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muLatvia | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muLatvia | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muLatvia | Affordable immigration law firms yeLatvia
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muLatvia?
Yechipiri pasipoti muLatvia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weLatvia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweLatvia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuLatvia, yechipiri pasipoti chirongwa cheLatvia chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eLatvia, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epamusoro muLatvia, magweta epasipoti epamusoro muLatvia uye akanakisa echipiri mapasipoti ekuLatvia, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muLatvia, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muLatvia.
Chechipiri pasipoti masevhisi eLatvia | Chechipiri pasipoti vamiririri muLatvia | Yechipiri mapasipoti magweta muLatvia | Yechipiri mapasipoti magweta muLatvia | Chechipiri pasipoti vanopa mazano eLatvia
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muLatvia?
Ndarama vhiza muLatvia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara yeLatvia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweLatvia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwewo. goridhe vhiza masevhisi eLatvia, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muLatvia, akanakisa egoridhe vhiza magweta muLatvia uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi veLatvia, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muLatvia, uye akanakisa mafambiro ekupinda muLatvia.
Ndarama vhiza services yeLatvia | Ndarama vhiza vamiririri muLatvia | Magoridhe vhiza magweta muLatvia | Magoridhe vhiza magweta muLatvia | Ndarama vhiza vanopa mazano eLatvia
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muLatvia?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muLatvia iEUR 80,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuLatvia yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muLatvia nevamiriri muLatvia vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara muLatvia.
Kugara nekudyara kuLatvia kunodhura?
Mutengo weKugara neInvestment kuLatvia uye Kugara nekudyara mari zvinodiwa kuLatvia ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeResidency neInvestment kuLatvia, isu tinopawo yakawanda yakawanda imwe rutsigiro ye Residency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuLatvia kana investor visa kuLatvia?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuLatvia kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuLatvia kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuLatvia kubva kuEurope, Residency nekudyara kuLatvia kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuLatvia kubva kuMalaysia, Residency nekudyara kuLatvia kubva kuBangladesh, Residency nekudyara kuLatvia kubva kuIndonesia, Residency nekudyara kuLatvia kubva kuSri Lanka, Residency nekudyara kuLatvia kubva kuNepal, Residency nekudyara kuLatvia kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuLatvia kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeLatvia
Kumbira Yemahara kubvunzana kune yako Residency neInvestment kuLatvia
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeLatvia
Link to Dhipatimendi Rekupinda muLatvia , ane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muLatvia